SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish Fon French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingaita Sei Kuti Nditsungirire Matambudziko Angu?
Uyewo, semumwe weZvapupu zvaJehovha, ndinoedza kuverenga mabhuku edu anotsanangura Bhaibheri. Mabhuku aya anondikurudzira chaizvo. Rimwe bhuku rakandibatsira pakarambana vabereki vangu rinonzi Mibvunzo Inobvunza Vechiduku​—Mhinduro Dzinoshanda. Ndichiri kuyeuka ndichiverenga nyaya ine musoro unoti, “Ndingafara Here Mumhuri Ine Mubereki Mumwe?” iri muBhuku 2 raMibvunzo Inobvunza Vechiduku​—Mhinduro Dzinoshanda.
Zvokufunga nezvazvo: Kuverenga Bhaibheri nemabhuku anotsanangura Bhaibheri kungakubatsira sei kuti utsungirire matambudziko ako?​—Pisarema 94:19.
Kumba kwedu tiri Zvapupu zvaJehovha, uye ungano yedu yakatibatsira chaizvo pakafa baba. Vaitipa zvekudya, vaitikoka kudzimba dzavo, uye vakaramba vari pedyo nesu kwenguva refu. Kutitsigira kwavakaita kwakandiratidza kuti Zvapupu zvaJehovha ndivo vaKristu vechokwadi.​—Johani 13:35.
Rugwaro rwakanyatsondikurudzira ndi2 VaKorinde 4:​17, 18. Runoti: “Kunyange zvazvo kutambudzika kwacho kuri kwenguva duku uye kwakareruka, kunoita kuti tiwane kubwinya kwakatokura kwazvo uye kusingaperi; zvatisingarambi takatarira zvinhu zvinooneka, asi zvinhu zvisingaoneki. Nokuti zvinhu zvinooneka ndezvenguva duku, asi zvinhu zvisingaoneki ndezvokusingaperi.”
Zvokufunga nezvazvo: Kusangana nedambudziko kungakubatsira sei kuongorora zvinangwa zvako?​—1 Johani 2:17.
^ ndima 9 Kubhiti rakaenzana nemasendimita 45.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaita Sei Kuti Nditsungirire Matambudziko Angu?
ijwyp nyaya 45